Takelaka rojo turner compost manafaingana ny dingan'ny fandringanana ny fako biolojika. Mora ny miasa ary manana fahombiazana lehibe, noho izany io fitaovana fanaovana zezika io dia ampiasaina betsaka tsy amin'ny orinasa mpamokatra zezika voajanahary ihany, fa koa amin'ny zezika any amin'ny toeram-pambolena.
Fanaraha-maso alohan'ny hanaovana fitsapana
◇ Hamarino raha efa nohosorana menaka manitra ny teboka reductor sy lubrication.
◇ Zahao ny tanjaky ny herinaratra. Naoty naoty: 380v, ny fihenan'ny tsindry dia tokony tsy latsaky ny 15% (320v), tsy mihoatra ny 5% (400v). Raha vantany vao mihoatra io faritra io dia tsy mahazo mandeha mitondra fiara.
◇ Hamarino raha azo antoka ny fifandraisan'ny motera sy ny singa elektrika, ary alao ny motera amin'ny tariby mba hiantohana ny fiarovana.
◇ Hamarino raha hentitra daholo ny tonon-taolana sy ny kofehy. Hamafiso azafady raha malalaka izy ireo.
◇ Zahao ny haavon'ny antontany.
Mitarika ny fihazakazahana fitsapana tsy misy enta-mavesatra
Mametraka ny fitaovana fanaovana composting miasa. Atsaharo avy hatrany ny turner compost raha vao miverina ny làlan'ny fihodinana, avy eo ovao ny làlan'ny fihodinan'ny fifandraisana elanelam-potoana. Mandritra ny fandidiana, henoy raha manana feo hafahafa ilay reducer, manamarina ny mari-pana ao an-tsoroka raha eo amin'ny mari-pana izy io, ary jereo raha misy fifandirana eo anelanelan'ny elanelan'ny fampifangaroana helika sy ny velaran'ny tany.
Fitsapana amin'ny hazakazaka
① Atombohy ny fihodinan'ny windrow compost sy paompy hydraulic. Mametraka moramora ny latabatra rojo eo amin'ny farany ambany amin'ny tanky fermentation, manitsy ny toeran'ny takelaka rojo arakaraka ny fisaka amin'ny tany: tazomy ny 30mm eo ambonin'ny tany raha tsy eo amin'ny 15mm ny lesoka mifangaro. Raha avo kokoa noho ny 15mm dia tsy mitazona afa-tsy 50mm ambonin'ny tany ireo lelany ireo. Mandritra ny zezika, rehefa tonga amin'ny tany ny lelany, dia nakarina ny takelaka rojo mba tsy hanimbafitaovana fanodinana compost.
② Mandritra ny fizotran'ny fizahana fitsapana rehetra, zahao avy hatrany ny fampitaovana composting raha vao misy feo tsy mahazatra.
③ Hamarino raha mandeha tsara ny rafitra fanaraha-maso herinaratra.
Zava-dehibe ny fiasa amin'ny lozisialy Chain Compost Turner Operation
Ny mpiasa dia tokony hijanona lavitra ny fitaovana fanaovana zezika, hisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Mijery ny turner compost alohan'ny hametrahana azy.
▽ Amin'ny famokarana, tsy azo atao ny mitazona sy mameno menaka menaka manitra.
▽ Miasa mifanaraka amin'ny fomba voalaza. Voarara tanteraka ny miasa amin'ny lalana mifanohitra amin'izany.
▽ Tsy mahazo miasa ny milina ny mpandraharaha tsy mahay. Amin'ny fepetra fisotroana toaka, tsy fahazoana aina ara-batana na fitsaharana ratsy, ny mpandraharaha dia tsy tokony hampiasa ilay turner compost helix.
▽ Ny làlan'ny fihodinan'ny rivotra rehetra dia tokony hiorenan'ny filaminana.
▽ Tsy maintsy tapahina ny herinaratra rehefa soloina ny slot na tariby
▽ Ny saina dia tsy maintsy omena mba hijerena sy hisorohana ny varingarina hidabolana ambany loatra hanimba ny familiana rehefa mametraka ny rojo rojo.
Entana fanaraha-maso alohan'ny hitondra fiara
● Hamarino raha azo antoka daholo ny fasteners, ary raha toa ka mety ny fanesorana ny lovia rojo amin'ireo singa ampitaina. Ny fanadiovana tsy mifanaraka dia tokony ahitsy amin'ny fotoana mety.
● Arotsaho ny fitondra famaky ary zahao ny haavon'ny menaka afovoan'ny boaty sy ny tanky hydraulic.
● Alao antoka fa azo antoka ny fifandraisana misy tariby.
Fikolokoloana amin'ny downtime
◇ Fanesorana ny residu ao amin'ny masinina sy ny manodidina azy
◇ Fanamafisana ireo teboka fanosorana rehetra
◇ Manapaka ny famatsiana herinaratra
Entana fikojakojana isan-kerinandro
● Mba hijerena ny menaka boaty ho an'ny kitapo ary ampio menaka manify.
● Hanamarina ny fifandraisana amin'ny contactor an'ny kabinetra fanaraha-maso. Raha simba dia soloina avy hatrany.
● Mba hijerena ny haavon'ny solika ao anaty boaty hydraulic ary ny famehezana ny toetoetran'ny fantson-tsolika. Manolo ny tombo-kase ara-potoana raha mitete ny solika.
Entana fizahana ara-potoana
◇ Manamarina ny toe-pahasalaman'ny reducer moto. Raha misy tabataba tsy ara-dalàna, na fanafanana, ajanony ary zahao avy hatrany ilay masinina.
◇ Fijerena ny bearings raha misy. Tokony hosoloina ny bearings tsy misy akanjo.
Olana iraisana sy fomba famahana olana
Fahombiazana tsy fahombiazana
Antoka tsy fahombiazana
Fomba famahana olana
Fialana amin'ny sarotra
Ny sosona akora matevina loatra Manala ireo sosona be loatra
Ny bara sy ny lelany dia tena simba tanteraka
Fanamboarana lelany sy vatan-kazo
Simba na mihitsoka ny fitaovana
avy amin'ny vondrona vahiny
Tsy manilika vatana vahiny na
fanoloana ny fitaovana.
Tsy milamina ny mandeha,
reducer misy tabataba na tazo
Misy raharaha hafa momba ny
Fanadiovana ireo raharaha hafa
reducer miaraka amin'ny tabataba na maripana ambony
Tsy fahampian'ny diloilo fanosorana
Manisy menaka manosotra
Fahasarotana na tsy fahombiazana amin'ny
mitazana ny motera, miaraka amina buzzing
Wear na fahavoazana tafahoatra
Ny vatan-kazo dia lasa mihodina
Fanesorana na fanoloana vaovao
Voltage ambany loatra na avo loatra
Famerenana ny fihodinan'ny compost
aorian'ny normal dia mandeha tsara ny herinaratra
Ny tsy fahampian-tsolika na fahasimbana
Manamarina ny reducer raha te hahita
inona no mitranga
tsy afaka mandeha ny fitaovana
Manamarina raha ny herinaratra
ara-dalàna ny fizaran-tany
Famehezana ny fifandraisana tsirairay